I-SiteKick: Ngokuzenzekelayo i-White-Labeled Analytics Reporting yaBathengi bakho | Martech Zone
Ukuba usebenzela abathengi abaninzi, ukwakha ingxelo esisiseko okanye ukudibanisa imithombo emininzi kwisisombululo sedashboard kunokuba nzima kakhulu. I-SiteKick inokusingatha yonke ingxelo yakho ephindaphindekayo ngeengxelo zeveki, zenyanga, kunye nekota.
Ingxelo nganye ikwifomathi yokubonisa (i-PowerPoint) kwaye inokufakwa uphawu, ibhalwe emhlophe kwi-arhente yakho okanye kumxhasi, kwaye iziphumo zinokuhlelwa okanye ulwazi olongezelelekileyo olunikezwe ngaphambi kokuthumela kumthengi wakho.
I-SiteKick ibonelela ngezi zibonelelo zilandelayo
Ukunika ingxelo ngemithombo emininzi -Dibanisa iGoogle, iFacebook, kunye / okanye idatha kaMicrosoft, ukhethe iiakhawunti ofuna ukuzixela, emva koko uvumele iSayithiKick yenze ezinye.
Iitshathi ezinamandla I-SiteKick yakha ngokuzenzekelayo iitshathi ezintle kunye neegrafu ezidityaniswa nenkcazo ebhaliweyo yejelo ngalinye.
Ukunika ingxelo yamajelo amaninzi -I-SiteKick ihlalutya lonke ijelo, ifumanisa ukuqonda okubonisa ixabiso lakho: imikhankaso emikhulu, iziphumo ezintsha ze-SEO, kunye nokunye.
Ukungqinelana kunye nenqanaba -I-SiteKick ihlalutya yonke indawo yedatha, ikhetha iziphumo eziphambili, kwaye ihanjiswe ngesitayile esingaguquguqukiyo kunye neethoni. Bamba abathengi abaninzi kwaye iqela lakho ligxile kwiziphumo, hayi kwiingxelo zokubhala ngesandla.
Iphulo kunye neRange Range Reporting -Zonke iingxelo zinokuthelekiswa nexesha elidlulileyo okanye kwithuba elifanayo kunyaka ophelileyo kubaxhasi bamaxesha athile.
Ukudityaniswa kweSitekick kunye neMithombo yeDatha ibandakanya
google Analytics -I-Crystal icacile, ukuqonda kobungcali kuGoogle Analytics. Icacisa imeko malunga neeseshoni zabathengi, ukuguqulwa, iinjongo, ukusebenza kwesitishi kunye namaphepha okufika.
Izikhangiso zeGoogle -Ilebhile emhlophe ebhalwe iintengiso zikaGoogle ebonisa ifuthe lakho kukhangelo, umboniso, kunye nemikhankaso yevidiyo. Uqhuba ngokwamaqela eentengiso, amagama aphambili, imibuzo kunye nokunye.
Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle -Ngxelo ngokwamagama aphambili, ukubonakala kokukhangela kwendalo kunye nenqanaba lokucofa, kunye namaphepha aphambili okufika.
I-Google Ibhizinisi Lwam -Ilebheli emhlophe ebhalwe nguGoogle kuShishino lwam ebonakalisa ifuthe lakho kwiminxeba yasekhaya eyenziwe, izicelo zendlela yokuqhuba, kunye nokuphononongwa kweshishini.
Izikhangiso ze-Facebook -Izimvo, ingxelo ebhaliweyo kwiiNtengiso zikaFacebook. Chaza ngokucacileyo ifanele, ukusebenza kwephulo, kwaye utyhile zonke iindlela abaphulaphuli abazibandakanya ngazo neentengiso zabathengi.
Amaphepha e-Facebook -Ingxelo yamaphepha kaFacebook axelela umxhasi ngendlela abanxibelelana ngayo nabaphulaphuli. Bonisa ukuba abaphulaphuli bazibandakanya kangaphi ngeposi kwaye ufunde ukuba yintoni esebenzayo.
Iintengiso zikaMicrosoft -Ilebheli emhlophe ebhalwe iMicrosoft yeeNtengiso ebonisa ifuthe lakho kukhangelo, umboniso, kunye nemikhankaso yevidiyo. Uqhuba ngokwamaqela eentengiso, amagama aphambili, imibuzo kunye nokunye.
MailChimp -Bonisa ukusebenza kwakho kwe-imeyile ngokunika ingxelo ngeMaxchimp ezenzekelayo. Bamba ngeyona mihla ifanelekileyo yokuthumela, imigca efanelekileyo yesifundo, kunye nobukhulu babaphulaphuli.
Imeyile kaEmma -Bonisa ukusebenza kwakho kwe-imeyile ngokunika ingxelo nge-automated Emma. Bamba ngeyona mihla ifanelekileyo yokuthumela, imigca efanelekileyo yesifundo, kunye nobukhulu babaphulaphuli.
AmaSpredishithi eGoogle -Faka nayiphi na enye idatha kwiingxelo zakho zeSayithiKick, ngokuzenzekelayo, usebenzisa ukudityaniswa kwamaphepha amatsha kaGoogle. Yenza iitafile zesiko kunye neetshathi ngqo kwingxelo yakho yeSayithiKick, kunye nolunye udibaniso lwethu.
Fumana ingxelo yasimahla ngoku!
tags: izixhobo zearhenteingxelo yabathengiUkuxelwa kwe-imeyile kaEmmaIintengiso ze-facebookiintengiso zikaGooglei-google analyticsUGoogle ishishini lamikhonkco lokukhangela kuGoogleingxelo ye-mailchimpIintengiso zeMicrosoftipower Point
IBirdie: Uphando lweNtengiso oluqhutywa yi-AI